Gbanwee na ụtụ isi mbufe: ndị mbido na ndị na-etinye ego na-a attentiona ntị! | Law & More B.V.
blog » Gbanwee na ụtụ isi mbufe: ndị mbido na ndị na-etinye ego na-a attentiona ntị!
Gbanwee na ụtụ isi mbufe: ndị mbido na ndị na-etinye ego na-a attentiona ntị!
2021 bụ afọ nke ihe ole na ole ga-agbanwe n'ihe gbasara iwu na ụkpụrụ. Nke a bụkwa ikpe gbasara ịtụgharị ụtụ. Na November 12, 2020, Houselọ Ndị Nnọchiteanya kwadoro ụgwọ maka ndozi nke ụtụ mbufe. Ebumnuche nke ụgwọ a bụ iji melite ọnọdụ nke ndị mbido na ụlọ obibi n'ihe metụtara ndị na-etinye ego, n'ihi na ndị na-etinye ego na-adịkarị ngwa ngwa na ịzụta ụlọ, ọkachasị n'obodo (buru ibu). Nke a na-eme ka o siwanye ike ndị mbido ịzụta ụlọ. Nwere ike ịgụ na blog a nke mgbanwe ga-emetụta ma edemede site na 1 Jenụwarị 2021 na ihe ị kwesịrị ị paya ntị na ya.
Ihe abụọ ahụ
Iji mezuo ebumnuche a akọwapụtara n’elu nke ụgwọ ahụ, mgbanwe abụọ, ma ọ bụ opekata mpe, ka a ga-ewebata n’ahịa ụtụ mbufe site na 2021. A na-atụ anya na nke a ga-eme ka ọnụọgụ nke ụlọ obibi site na ndị na-azụ ahịa mbido na belata azụmahịa ụlọ site na ndị na-etinye ego na ya.
Measurekpụrụ mbụ n’okwu a metụtara ndị na-ebido ya, na nkenke, gụnyere nnwere onwe site na ụtụ mbufe. N'aka ozo, ndi mbido agaghi akwusi ugwo mbufe site na 1 Jenụwarị 2021, ka ịzụta ulo buru ihe diri ha onu. N'ihi nnwere onwe ahụ, ụgwọ niile metụtara ịzụta ụlọ, dabere na mmụba nke ọnụ ụlọ, ga-ebelata n'ezie. Biko rịba ama: nnwere onwe ahụ bụ otu oge na ọnụahịa ụlọ ahụ agaghị agafe € 400,000 site na 1 Eprel 2021. Na mgbakwunye, nnwere onwe ahụ na-emetụta naanị mgbe mbufe nke ihe onwunwe ahụ na-ewere ọnọdụ na notari-obodo notari na ma ọ bụ mgbe 1 gasịrị Jenụwarị 2021 na oge ibinye aka na nkwekọrịta ịzụta azughi oke.
Ihe ọzọ metụtara ndị na-etinye ego ma pụtara na ihe ha nwetara ga-atụ ụtụ na ọnụ ọgụgụ izugbe dị elu site na 1 Jenụwarị 2021. A ga-abawanye ọnụego a site na 6% ruo 8% na ụbọchị a kpọtụrụ aha. N'adịghị ka ndị na-ebido ya, ọ na-adịkwu ọnụ maka ndị na-etinye ego ịzụta ụlọ. Maka ha, ọnụego zuru ezu metụtara ịzụta ụlọ ga-abawanye n'ihi mmụba nke ụtụ isi ahịa. Na mberede, ọnụego a abụghị naanị na ụtụ isi nweta nke ndị na-abụghị ebe obibi, gụnyere ogige azụmahịa, kamakwa inweta ụlọ nke a na-agaghị eji ma ọ bụ naanị maka nwa oge dị ka ebe obibi. N'ebe a, dị ka akwụkwọ nkọwa nkọwa maka ụgwọ maka mgbanwe nke ụtụ mbufe, tụlee, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ezumike, ụlọ ndị nne na nna zụrụ maka nwa ha na ụlọ ndị mmadụ na-azụtaghị, mana site na iwu mmadụ ndị dị ka ụlọ ọrụ ụlọ.
Mmalite ma ọ bụ ọ investụ?
Ma olee ihe ị kwesịrị iburu n'uche? N'aka ozo, i bu onye mbido ka obu onye na etinye ego? Ma onye ọ bụla na-abanye n'ahịa ụlọ nke onye nwe ya na nke mbụ ya na ọ nwetabeghị ụlọ mbụ, enwere ike iwere dị ka mmalite maka ịza ajụjụ a. Agbanyeghị, onye tozuru oke maka ịhapụ onye ga-amalite yana onye mmụba na ụtụ ụtụ isi na-emetụta, anaghị ekpebisi ike dabere na njirisi a. Ọ baghị uru maka ịhapụ ma ị bụ onye na-azụ ihe na-enwetela ụlọ tupu oge ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ahụ ekwesịghị ịbụ ụlọ mbụ gị nwere ụlọ iji ruo eruo maka nnwere onwe ahụ.
Gwọ maka ndozi nke ụtụ mbufe na-eji mmalite mmalite dị iche. Ma enwere ike ịkọwa gị dị ka onye mbido ma ya mere ị ga-enwe ohere nke ịhapụpụ onye a na-adabere na njirisi nchịkọta atọ. Criteriakpụrụ ndị a bụ:
Oge nke onye nnweta. Ka ewere gị dị ka onye mbido, ị ga-anọ n’agbata afọ 18 na 35. A na-eji oke 35 dị na ụgwọ ahụ n'ihi na nyocha nke AFM egosila na ọ na-esikarị ike karịa ịkwụ ụgwọ maka onye zụrụ ya na obere afọ karịa 35 afọ. Na mgbakwunye, maka itinye nke nnwere onwe ya na njedebe dị ala nke afọ 18, ihe achọrọ ka ị dị afọ ga-emetụta. Ebumnuche nke oke oke a bụ iji gbochie ojiji nke ndị mbido na-ekwesịghị ekwesị: ọ gaghị ekwe omume ndị nnọchi iwu ka ha jiri nwepu mgbe ha na-azụ ụlọ na aha nwatakịrị. Ọzọkwa, a ga-etinyerịrị ogo nke afọ site n'aka onye nwe ya, ọbụlagodi na ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-azụta otu ụlọ jikọtara ọnụ. Ọ bụrụ na otu n'ime ndị na-azụ ahịa ihe karịrị afọ 15, ihe ndị a metụtara onye zụrụ ihe a: enweghị nnwere onwe na nke ya.
Onye nnweta ahụ etinyebeghị ọrụ a. Dịka e kwuru, a ga-eji nnabata ndị na-ebido ebido naanị otu ugboro. Iji hụ na emebaghị iwu a, ị ga-ekwupụta n'ụzọ doro anya, n'ụzọ siri ike na enweghị ndoputa na ederede na ị tinyebeghị mbido nnabata ahụ na mbụ. A ga-edozi nkwupụta ederede a na notari iwu obodo iji jiri nnwere onwe site na ụtụ mbufe. Na ụkpụrụ, akwụkwọ iwu obodo nwere ike ịdabere na nkwupụta ederede a, belụsọ na ọ maara na enyerela nkwupụta a ezighi ezi. Ọ bụrụ n ’ọ pụta n’ikpeazụ na gị dịka onye zụtara ihe etinyela mwepu ahụ na mbụ n'agbanyeghị nkwupụta ewepụtara, a ga-eme nyocha ọzọ.
Ojiji nke ulo ozo kariri nwa oge dika isi ulo nke onye nnweta. Yabụ, akụkụ nke ndị mbido ga-ejedebe na ndị na-azụ ahịa ga-ebi n'ụlọ ahụ. N'ihe banyere ọnọdụ a, ọ dịkwa mkpa ka gị dị ka onye na-azụ ihe iji kwupụta na ederede n'ụzọ doro anya, na-enweghị ntụkwasị obi na a ga-eji ụlọ ahụ mee ihe ọzọ karịa nwa oge na dịka isi ụlọ, yana ịnyefe nkwupụta a edere na obodo-iwu notari tupu nnweta ma ọ bụrụ na nnweta na-aga site na ya. Iji oge nwa oge pụtara, dịka ọmụmaatụ, mgbazinye ụlọ ma ọ bụ iji ya eme ezumike. Ọ bụ ezie na ebe obibi bụ aha ịdenye aha na ọgbakọ ma bie ndụ ebe ahụ (gụnyere mmemme egwuregwu, ụlọ akwụkwọ, ebe ofufe, nlekọta ụmụaka, ndị enyi, ezinụlọ). Ọ bụrụ na, dịka onye na-azụ ahịa, ị gaghị eji ụlọ ọhụrụ ahụ dịka ebe obibi gị ma ọ bụ naanị nwa oge site na 1 Jenụwarị 2021, a ka ga-atụ ụtụ gị na ọnụego 8%.
Ntụle nke njirisi ndị a, wee zaa ajụjụ maka ma ị tozuru maka itinye akwụkwọ ikike, na-ewere ọnọdụ mgbe enwetara ụlọ ahụ. Karịsịa, nke a bụ oge mgbe edobere akwụkwọ ire ere na notari. Ozugbo tupu e gbuo akwụkwọ ahụ, edepụtara ederede banyere ọnọdụ nke abụọ na nke atọ ga-edozikwa na notari ahụ. Oge a bịanyere aka na nkwekọrịta zuo adịghị mkpa maka okwu nke nkwupụta edere, dịka ọ dị maka inweta nnabata ndị mbido.
Purchasezụta ụlọ bụ ihe dị mkpa maka ma onye mbido ma onye ọchụnta ego. Chọrọ ịma ụdị nke ị so na usoro ndị ị ga-elebara anya site na 2021 gaa? Ma ọ bụ ị chọrọ enyemaka na ịme nkwupụta achọrọ maka ịhapụ? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na ụlọ na iwu nkwekọrịta ma nwee obi ụtọ inye gị aka na ndụmọdụ. Ndị ọka iwu anyị ga-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka na usoro ịgbaso, dịka ọmụmaatụ mgbe a bịara n'ịbịaru ma ọ bụ ịlele nkwekọrịta ịzụta.
Previous Post Ndobe nke isiokwu
Next Post Esemokwu nke Director